Liverpool oo u jeesaneysa Michu hadii ay weyso Sturridge. - Caasimada Online
Home Warar Liverpool oo u jeesaneysa Michu hadii ay weyso Sturridge.
Liverpool oo u jeesaneysa Michu hadii ay weyso Sturridge.
Tababare Brendan Rodgers ayaa qiimeynaya inuu lasoo wareego weeraryahanka kooxda Swansea City Michu hadii uu ku guul darreysto Janaayo weeraryahanka diirada u saaran Daniel Sturridge, sida uu qoray Wargeyska Sunday People.
Tababaraha kooxda Liverpool ayaa u baahan inuu kooxdiisa dhiig cusub kusoo daro bisha Janaayo marka uu suuqu furmo waxaa liiskiisa weerarka ugu sareeya weeraryahanka kooxda Chelsea Sturridge.
23-jirkaan ayaa keliya loo ogolaan karaa inuu kooxda ka tago hadii ay isku dhisaan weerarka oo ay keenadaan weeraryahanada ay diirada u saaran tahay, iyo xittaa hadii ay Chelsea hesho ragga u qaaska ah, heshiis uu Sturridge ugu dhaqaaqo Reds ayaana ku xiran in mushaarkiisa laga dhigo 80 kun oo ginni isbuucii.
Laakiin Liverpool, ayaa u diyaarineysa 7 milyan oo ginni halka aysan ka fikiri doonin mushaarkiisa hadii ay ku guul darreystaan Sturridge waxay diyaarsadeen qorshe kale.
Taas ayaa loo arkaa inuu tababare Rodgers uu mar kale u jeesan karo kooxdiisii horeSwanseaweeraryahankeeda Michu, kaasoo si aad ah uga soo dhex dhalaalay Premier League.
Tababaraha Swans Michael Laudrup ayaan dooneyn inuu iska lumiyo Michu wuxuuna madaxiisa horaan dul dhigay 30 milyan oo ginni, taasoo ah lacag aan macquul aheyn.
Laakiin waxaa laga yaabaa inay Reds ku dalbato 10 milyan oo ginni ninka ay lix bilood ka hor kooxdiisu kula soo wareegtay 2 milyan.
26-jirkaan heerka caalami ee dalka Spain ayaa 13 gool dhaliyey 18 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkaan halka uu laba gool oo ka mid ah kulankii shalay ka dhaliyey Norwich.